Vehivavy Shinoa : Mandany Ny Andro Tsy Fiasàny Amin’ny Fanaovana Hetsi-panoherana Ny Fandidiana Tarehy Zara Fa Vita Any Korea Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Oktobra 2015 6:25 GMT
Vondronà Shinoa mpizahatany, nanao hetsi-panoherana tany Seoul noho ny fandidiana tarehy tsy nety. Sary avy tamin'ny Weibo.
Nandritra ny andro tsy fiasàna “Golden Week” (Herinandro Volamena) ny faran'ny volana Septambra ka hatramin'ny voalohandohan'ny volana Oktobra, nisy vondronà Shinoa mpizahatany nandeha tany Seoul, Korea Atsimo, mba hanao hetsi-panoherana teny an-dalambe, noho ny fandidiana tamin'ny tarehy tsy nety izay nolazainy fa natao tao amin'ilay firenena.
Ireto ireo vokatr'ilay fandidiana tsy nety : tsy fifandrifian'ireo valanorano, haben'ny maso sy hodimaso ary takolaka tsy mitovy, orona mitolefika ambany ary hozatry ny tarehy mihenjana be, ankoatra ireo vokatra hafa. Nilaza ireo vehivavy fa voarebirebin'ireo mpiasan'ny fitsaboana izy ireo mba hanao ny fandidiana, tsy nahalala akory ny fankatoavana azon'ilay toerana sy ny fahaizan'ireo mpandidy.
Araka ny media Shinoa eo an-toerana, nitaraina ireo vehivavy mpanao hetsi-panoherana fa nohidian'ilay hopitaly tao anaty efitra maizina aloha izy ireo ary nogiazana ny pasipaorony. Ny farany, nosamborin'ny polisy izy ireo.
Any Shina, tsy eken'ny lalàna ny fikarakaran'ireo mpanjifa hetsi-panoherana hitakiana fampahafantarana sy onitra sahala amin'ny ataon'ireo vehivavy ireo, fa any Korea Atsimo kosa, afaka manao izany ara-dalàna tsara izy ireo, ary efa imbetsaka ny sasany tamin'ireo vehivavy no nandeha tany Seoul mba hanao hetsi-panoherana nanoloana ireo hopitaly.
Indostria mitentina lavitrisa maromaro
Hatramin'ny nanesorana ny fibahanana ny fandidiana tarehy tany Shina ny taona 2001, nitombo hatrany, maherin'ny 40 isan-jato isan-taona ilay sehatra, tato anatin'izay 15 taona izay. Ny taona 2012, nandany 300 lavitrisa yuan (eo amin'ny 47,2 lavitrisa dolara Amerikana) ireo vahoaka Shinoa tamin'ny fanovàna endrika, ary nampiditra mpiasa maherin'ny 20 tapitrisa ilay sehatra ary natao tany amin'ireo efitra tsy manana fahazoandàlana avy amin'ny fanjakana ny manodidina ny 70% amin'ireo fandidiana tany Shina.
Teo anelanelan'ny 2009 sy 2010, maherin'ny 3,4 tapitrisa ny fandidiana ho fanovàna endrika natao tao Shina, ary farafahakeliny fitarainana miisa 20.000 noho ny tarehy simba no voaray isantaona.
Novinavinaina fa ny taona 2018, hitentina 850 lavitrisa yuan ( eo amin'ny 133,72 lavitrisa dolara Amerikana) ilay tsenan'ny fandidiana tarehy, satria misokatra kokoa amin'ny hevitra fanovàna tarehy ireo taranaka tanora kokoa, ary vonona ny hizara ireo zavatra niainany ety amin'ny Aterineto.
Misafidy ny hitsidika an'i Korea Atsimo ireo Shinoa manamanana kokoa, toerana fantatra amin'ny maha toerana malaza fandehanana azy amin'ny resaka fandidiana tarehy any Azia, noho ny tolotra ara-pitsaboany. Ny taona 2014, tsy latsaky ny Shinoa mpizahatany miisa 56.000 no nitsoriaka nitsidika fotoana fohy ilay firenena.
“Fanomezana avy amin'ireo ray aman-dreny ny tarehy”
Kanefa, tsy faly tamin'ireo vokatry ny fandidiana azy daholo akory ireo rehetra nanao izany, ary mety hisy fahasimbàna hita mivaingana raha olona tsy nahazo fahazoandàlana no manao ny fandidiana.
Rehefa tafaverina tany Shina ireo vaovaon'ny fanaovana hetsi-panoherana, lasa lohahevitra mahamay tao amin'ny sampana Huati an'ny vohikala media sosialy malaza Weibo io (#manao hetsi-panoherana any Seoul ireo mpanjifa nanao fandidiana tarehy tsy nety#). Fa tsy nankasitraka ilay fandidiana sy ny hetsik'ireo vehivavy ny ankamaroan'ireo fanehoankevitra — tsy nalaky nahazo faka tany Shina toy ny an'ilay indostrian'ny fandidiana ny lanjan'ilay hetsi-panoherana. Mpisera maro amin'ny Aterineto no nifikitra tamin'ny hevitra hoe fanomezana avy amin'ireo ray aman-dreny ny vatana:
Fantatry ny reninareo ve hoe namboarinareo ny tarehinareo? Tsy malahelo azy ireny ve ianareo? Inona no hanaovanareo hetsi-panoherana?
Inona ny anton'ilay hetsi-panoherana? Mandany vola hanamboarana tarehy ianareo. Tsy nisy olona nanery anareo hanao izany. Mety ahitàn-doza ny fandidiana vatana, ary tokony vonona ny hizaka ny vokatry ny fandaniany vola izy ireo.
Fanomezana avy tamin'ireo ray aman-dreny sy Andriamanitra ny tarehin'ny olona. Inona no ilàna hanova an'io?
Nahoana no mametraka ny fitokisanareo amin'ny dokambarotra. Nahoana ianareo no tsy matoky ireo ray aman-dreninareo? Tena mampalahelo izany. Nahoana no lasa zava-poana ny olona eto amin'ity tany ity ?
‘Tokony hiditra an-tsehatra ireo governemanta’
Etsy ankilany, nanome sosokevitra ny tokony hidiran'ireo governemanta an-tsehatra mba handamina io olana io ireo mpampiasa manana fomba fijery malefaka kokoa:
Diso ratsy loatra ny sasany amin'ireo mpisera amin'ny aterineto. Samy te-ho tsara daholo ny rehetra, ny raharahanareo atao an-tsaina ary tazony ireo fanehoankevitra ratsinareo. Tsy misy tokony ilaina hitoriana ireo fotokevitra sahala amin'ny hoe avy amin'ireo ray aman-dreny ny “nofo, volo ary hoditra”. Ny tena zava-dehibe izao dia ny hanainga ireo manampahefana Shinoa mba handamina io olana io amin'ireo manampahefana Koreana Atsimo.
[Raha toa ka tsy nanana fahazoandàlana ireo orinasa ireo] tokony mangataka onitra ireo mpanao hetsi-panoherana. Samy tia tarehy tsara daholo ny rehetra, tokony ho saziana ireo olona manararaotra ireo mitady fahatsaràna ary manimba azy ireny. Amiko manokana, mieritreritra aho fa tokony halamina any amin'ny ambaratongan'ny governemanta io resaka io…